Ny endriky ny rokoko dia tany Eoropa Andrefana taona maro lasa izay. Inona no tena miavaka amin'io fomba io ary nahoana no mbola ankafizin'ny vehivavy maro?
Ireo lamaody amin'ny fomba rokoko
Ny antsasaky ny vanim-potoan'ny Rokoko dia nanavaka ny volom-borona manify sy maotina. Nefa rehefa afaka kelikely, dia tonga ny fehezam-boninkazo mahagaga sy mahatalanjona. Tamin'ny voalohany, ny volom-borona dia nokapohina tsotra fotsiny ary nokaravasina ny atody, namolavola ny atody. Ary avy eo ny satroboninahitra amin'ny loha, dia nisy rojo-tady rongony maromaro napetraka teo an-tsofin'ny sofina. Tao ambadiky ny volony dia singa tena izy. Raha tokony ho fehezam-boninkazo dia nampiasainay fehezam-boninkazo. Nosokafany ny volony tamin'ny voninkazo, ary nitodika tamin'ny perla.
Ny endriky ny rokoko amin'ny volony tsy hita maso dia vokatry ny mpitsabo ny Leonard Ote, antsoina hoe Bolar. Ny lamaody ao amin'ny style of Rococo dia nitaky vombom-bidy, lipstick, volo ary fitaovana hafa. Izany no mahatonga ny volo tsy nanongotra andro vitsivitsy na herinandro iray manontolo. Ireo vehivavy dia natory teo amin'ny loha-laharana manokana izay nitazona io famirapiratana io teny an-dohany.
Mba hanamboarana sary iray dia nampiasainay headdresses. Ny hatsaran-tarehy hatsikana "hatsikana" dia sary hafahafa izay natsangana tao anaty volo ary nanana lanjany lehibe. Ny firavaka ao amin'ny style rocoko ho an'ny fanolokoloana volo dia nanjary ampahany manan-danja amin'ny sary. Natao daholo ny fandaharam-potoana rehetra, manasongadina hetsika ara-politika, vanim-potoana ary fotoana fohy. Taorian'izay dia nanomboka nanaron-doha ny onja ny chiffon, firavaka, volony ary voninkazo. Bolyar dia nahavita namorona firavaka avy amin'ny zava-drehetra tonga teo an-tanany, ary faly ireo vehivavy.
Ny akanjo amin'ny endriky ny rokoko
Ny fitafiana ao amin'ny style Rococo dia mbola mijanona ho moramora. Tamin'ny voalohany, nanjary kely kokoa ny jirony rokoko, nefa nitombo indray ny habeny, ary nanjary endrika oval ny taolam-paty. Ny vatan'ny akanjon'ilay akanjo dia nidina tsikelikely teo ambany elany. Ny tapany ambony amin'ny akanjo rokoko dia nanomboka nitovy tamin'ny triatra, dia mbola nisokatra ihany ny decollete tamin'izany fotoana izany. Ny tarehimarika ho an'ny endriky ny vehivavy iray ao amin'ny fomba-rokoko dia nanjary sisin-dàlana mazava: ny ambony - bodis kely kely, ary midina izy dia miditra anaty satroboninahitra mahafinaritra sy volomparasy. Ny lambany amin'ny akanjo amin'ny elbows dia manjary mendri-kaja, izy ireo dia voaravaka amin'ny lais cascading sy ny loko.
Sarim-bolo rokoko sarobidy sarotra alaina sary an-tsaina fa tsy misy loko maro. Ankoatra izany, matetika amin'ny akanjo, fampiasana voninkazo maro na kanto no ampiasaina. Tamin'ity vanim-potoana ity, ny voninkazo dia ampiasaina voalohany hanamboatra akanjo sy rokoko volo. Ny tapa-damba, satin ary satina dia nalaza. Ny zava-misy dia mamela ny hamolavola fako maro sy mifanaraka tsara amin'ny dantelina maingoka, izay toetra mampiavaka ny endriky ny Rococo.
Ny akanjo amin'ny rokoko dia manana ny endriny manokana. Maro ny fiheverana nomena ny lamba firakotra. Hatramin'ny nisintonana ny decollete, ny ranjon'ny rongony dia nahita hatrany. Mandritra io vanim-potoana io dia manomboka mitafy volom-boasary ny vehivavy, na ny loko fotsy sy mamiratra. Ny lamba firakotra dia vita amin'ny seza mampiasa gisabe sy embroidery. Ny lanjany lehibe dia nifandray tamin'ny fifandraisana, mpankafy sy fonon-tanana. Ireo antsipiriany momba ny sary izay natao hanehoana ireo gentlemen.
Ny lokon'ny rokoko dia nanantitrantitra ireo loko malefaka sy fandriana. Nampiasa manga manga sy mavo ary mavokely izahay. Ny ankizivavy rehetra dia nahita tovovavy tanora sy virjiny tsy mihoatra ny roapolo taona. Izany vokatra izany dia tratra niaraka tamin'ny fanampian'ny vono sy vovoka. Indraindray ny fampiasana kalsioma dia nanao vazivazy ratsy. Ny zava-nitranga dia niova tanteraka ny endriky ny vehivavy fa tsy nahafantatra azy ny vadiny. Ny tarehimarika dia tena tanora tokoa, saingy tsy misy aina ary toy ny saron-tava. Tsy dia tia vehivavy mahavelona ny vehivavy. Tena nalaza ny fofon'a patchouli, neroli, faka voloko ary ranomamy.
Amin'ny inona ny manao akanjo mavokely mena?
Sary famaranana amin'ny soccer football
Ahoana ny fisafidianana ny jeans?
Ahoana ny fomba hampifandraisana vehivavy mifamaly?
Akanjo lava tsara tarehy - 56 sary avy amin'ny akanjo tsara indrindra ho an'ny tsirony rehetra
Fotoam-pivorian'ny Taom-baovao - hevitra
Ahoana ny fomba hanaovana ny mofomamy miaraka amin'ny ranonorana?
Ahoana no hianaranao hiakanjo tsara?
Ny zo dia mametraka sary mitsambikina
Fitafy fitondra mandriaka ho an'ny vehivavy matavy
Asa akanjo - akanjo fitafy
Ny akanjon'ny kolontsain'ny vanim-potoanan'ny URSS
Ahoana ny fomba ifehezana ny sarety?
Fetin'ny Kurban Bayram
Ahoana no hananganana gazety iray mandritra ny 2 herinandro?
Imodium dia analogy
Fiomanana amin'ny vy ho an'ny ankizy
Jennifer Lawrence dia niseho tao amin'ny dokambarotry ny fanangonana tsanganana vaovao an'ny marika Dior
Apetaho amin'ny tananao ny valindrihana
Photoshoot amin'ny endrika "Mafia"
Ny fanafody famonoana bibikely maro
Famelezana - soritr'aretina, famantarana voalohany
Bakomanga miaraka amin'ny omby
Green Corrector amin'ny endrika
Ny tapa-ketra Adidas teo ambonin'ny soroka
Endrey mahasalama ny hamonoana ny henan'omby?
Ohatra 18 momba ny famindram-po ireo ray aman-dreny
Mamboly tongolo lay
Ny felam-bonon-tavoahangy - ny fananana medikaly sy ny fanoherana
Ny ra ao amin'ny sperm
Alika milanja - fampiharana